0 Wednesday May 20, 2020 - 11:06:14
0 Tuesday May 19, 2020 - 20:50:21
0 Tuesday May 19, 2020 - 20:49:21
Rajeb Dayib Erdogaan oo ah madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqay in bandow cusub lagelinayo dhammaan magaalooyinka uu dalkaas ka koobanyahay si looga hor tago caabuqa Covid19.
0 Tuesday May 19, 2020 - 14:27:42
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in markale dagaallo beeleedyo ay dib uga qarxeen deegaanno gobolkaas katirsan.
0 Tuesday May 19, 2020 - 14:23:55
Ciidamada xukuumadda Alwifaaq ee wadanka Liibiya ayaa la wareegay deegaanno hor leh oo dhaca galbeedka wadankaas kadib dagaallo ay lagaleen maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar.
0 Tuesday May 19, 2020 - 07:10:26
0 Monday May 18, 2020 - 15:32:09
0 Monday May 18, 2020 - 15:25:22
0 Monday May 18, 2020 - 15:17:53
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku dhawaaqay in uu xayiraaddii ka qaaday maandooriyaha khaadka oo muddo ku dhow bil aan lasoo geliyay deegaannada uu maamulkaasi ka arrimiyo.
0 Monday May 18, 2020 - 14:23:17
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in markale weerar naf hurnimo lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan xukuumadda Kaabuul balse uu Mareykanku tababaray.
0 Monday May 18, 2020 - 12:12:03
0 Monday May 18, 2020 - 11:59:08
0 Sunday May 17, 2020 - 16:28:42
0 Sunday May 17, 2020 - 13:33:26
0 Sunday May 17, 2020 - 12:06:47
Mas'uul katirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Shuuciyadda Shiinaha ayaa si lama filaan ah ugu dhintay dhulka Falasdiin ee ku jira gummeysiga Yahuudda.
0 Sunday May 17, 2020 - 11:44:07
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay weerar khasaara dhaliyay oo ciidamada Daraawiishta maamulkaas maalmo ka hor lagula beegsaday duleedka magaalada Boosaaso.
0 Saturday May 16, 2020 - 15:12:00
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gummeysato ayaa sheegaya in weerar cusub oo khasaara badan dhaliyay ay lakulmeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada booliska dowladda Kenya.
0 Saturday May 16, 2020 - 11:47:44
0 Saturday May 16, 2020 - 11:46:44
0 Thursday May 14, 2020 - 20:54:04
0 Thursday May 14, 2020 - 20:53:04
Ugu yaraan 8 askari oo katirsan maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Jubbaland ayaa dhintay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii gaari ay wateen ciidamada Xabashida Itoobiya.
0 Thursday May 14, 2020 - 20:40:53
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar cusub oo khasaara dhaliyay lagu qaaday ciidamo katirsan maamulka 'Puntland'.
0 Thursday May 14, 2020 - 10:03:41
0 Thursday May 14, 2020 - 09:48:47
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weeraro is xigxigay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.
0 Thursday May 14, 2020 - 09:46:47
0 Thursday May 14, 2020 - 08:14:20
0 Thursday May 14, 2020 - 07:17:44
0 Thursday May 14, 2020 - 07:14:47
0 Wednesday May 13, 2020 - 20:07:36
0 Wednesday May 13, 2020 - 16:04:57
« Prev1 ... 567891011 ... 353Next »